तुलानारायण साह - कान्तिपुर समाचार
गत शनिबार दिउँसो कुनै एफएममा एउटा समाचार बजिरहेको थियो । त्यस अनुसार, सप्तरीको बलान बिगुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको घरमा बम विस्फोट भएको थियो । कुनै सशस्त्र समूहले त्यसको जिम्मा लिएको थियो । गाउँपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारको विरोधस्वरूप विस्फोट गरेको उसको दाबी थियो ।
गएको माघ १२ गते कान्तिपुरमा मधुकर उपाध्याको ‘पानीको कुरा पछि गरौँ’ पढेपछि यो रचना आवश्यक ठानेँ । मधुकर उपाध्यालाई म गुरु मान्छु । २०६१/६२ सालतिर हामी एउटै संस्थामा काम गर्थ्यौँ । अजय दीक्षित, दीपक ज्ञवाली, सुधीन्द्र शर्मा, मधुकर उपाध्याजस्ता पानीविज्ञहरू कुनै बेला एउटै संस्थामा कार्यरत थिए ।
सुरुमा मधेसी युवाहरूबारे लेख्ने काम सजिलै होलाजस्तो लागेको थियो । स्वीकार गरिहालियो । लेख्दै जाँदा निकै असहज महसुस भयो । यो निकै ‘वेग’ विषयजस्तो लाग्यो । मधेसको कुन भेगको युवाबारे लेखाँै ? कुन जातको युवाका भावनालाई प्राथमिकता दिऊँ ? मधेसभित्र बसिरहेका मधेसी युवाहरूको मनोविज्ञान एकखाले महसुस हुन्छ । काठमाडौंलगायत पहाडी सहरहरूमा रहेका मधेसी युवाहरूको मनभित्र अर्कै कुरा चलिरहेको जस्तो लाग्छ । विदेशमा रहेका मधेसी युवाहरू के सोच्दा हुन् ? कसरी आफ्नो परिवार, समाज र देशबारेको सोचमा तारतम्य मिलाउँदा हुन्, खुट्याउनै गाह्रो !
राजनीतिक रूपान्तरणमा हाम्रा दलहरूको मानसपटलमा एकखाले रोडम्याप थियो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रूपान्तरणको कुनै रोडम्याप थिएन । आजको नेपालको शिक्षाको जुन अवस्था छ, त्यो कुनै दलको रोडम्यापअनुरूप होइन ।
तुलानारायण साहका लेखहरु :
युक्ति मरिकको सपना
कथित महादलित डोम जातिका एक बाबु प्रथम मरिकका छोरा युक्ति मरिक दु:खजिलो गर्दै पढेर वकिल बन्ने क्रममा छन् भने युक्तिले आफ्नो छोरालाई डक्टर बनाइछाड्ने सपना देखेका छन् । समय, समाज र संघर्षमा आएको बदलाव डोमको यो बाबु–छोरा पुस्तामा देख्न सकिन्छ ।
मोदी भ्रमणपछिको राउत तरंग
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिवसीय नेपाल भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भ्रमण ऐतिहासिक र पूर्ण सफल भएको दुवै देशका सरकारको दाबी छ । मोदीको यस भ्रमणबारे काठमाडौंमा खासै उत्साह थिएन । तर जनकपुरमा निकै उत्सवको माहोल देखिएको थियो । खासगरी मधेसी समाज र प्रदेश नं.२ को सरकारले यस भ्रमणलाई शान र प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो ।